जिउँदा सहिद: जुतीराम घर्तीको लागि सहयोग याचना, रुकुमको खारामा लागेको गोलि अझै शरीरमै | DON Nepal जिउँदा सहिद: जुतीराम घर्तीको लागि सहयोग याचना, रुकुमको खारामा लागेको गोलि अझै शरीरमै – DON Nepal
Home घटना जिउँदा सहिद: जुतीराम घर्तीको लागि सहयोग याचना, रुकुमको खारामा लागेको गोलि अझै शरीरमै
जिउँदा सहिद: जुतीराम घर्तीको लागि सहयोग याचना, रुकुमको खारामा लागेको गोलि अझै शरीरमै
By Don NepalDec 18, 2017, 02:35 am0
२०६१ साल चैत्र १६ का दिनलाई मध्यनजर गरेर सल्यान र रोल्पाको सिमाना हुँदै डिभिजन कमाण्डर पासाङको कमाण्डमा यिनै जुतिराम घर्ती तत्कालीन बटालियन सह-कमाण्डर भएर खारा आक्रमणको लागि आउदै थिए ।
उता चाैरजहारी तर्फबाट डिभिजन कमाण्डर प्रभाकरको कमाण्डमा अर्को ग्रुप छापामार शैलीमा लड्न तयारी पोजिशनमा आयो । पासाङको नेतृत्वमा जुतिराम घर्तीहरू खाैलामा निस्किने बित्तिकै झुल्नेतामा तैनाथ भएका सेनाहरुले पहिलो फायर गरे ।
जुतिराम घर्तीको ग्रुपले सी आकारमा उक्त फायरको प्रतिबाद गर्दै सेना माथि जाइलागे र घेर्दै लगे । सेना भाग्दै खाराको ब्यारेकमा छिर्यो । सेनालाई लखेटेर ब्यारेकसम्म पुर्‍याउदासम्म रात परिसकेको थियो ।
पहिलो एसल्ट ग्रुपलाई जुतीराम घर्तीले काँडेतार पार गर्न पठाए । दोश्रो एसल्ट ग्रुपलाई काँडेतार घेर्न लगाए र तेस्रो एसल्ट ग्रुपलाई रोडको बाहिर पोजिशनमा बस्न लगाए ।
आफु सह-कमाण्डर भएको तर कमाण्डरसँगको सम्पर्क बिच्छेद भएकोले निर्देशन जिम्मेवारी आफुले सम्हालेका थिए । असिना जस्तै गोली बर्सिरहेको थियो । लडाई निकै घमासान हुँदै थियो ।
दुबैतर्फबाट बम वर्षा उत्तिकै बेतोडले भयो । अचानक सेनाको टुइन्चटावर मोर्टार पड्केर जुतिराम घर्तीको छेउमै बिस्फोट भयो । यतिबेलासम्म उनी गम्भीर घाईते भएका थिए ।
उनले आलो घाउमा सम्हालिएर वरिपरि हेरे । छेउमै भर्खर त्यहि युद्धमा उनकै सुरक्षार्थ खतिएका गार्ड छतविक्षत भएर मारिएका थिए । उनलाई त्यतिमात्र थाहा छ । त्यसपछि अत्यधिक रक्तस्रावले कतिखर बेहोस भए थाहा पाएनन् ।
कहाँ कहाँ लुकि लुकि सहकर्मीहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरुको निरन्तर प्रयासले १६ दिनमा बल्ल उनको होश आयो । तर बोली बन्द थियो । एक किसिमले अर्ध पागल । त्यहिँ देखि उनको जीवन असक्त र शारीरिक रुपमा अपाङ्ग भए । उनको बाहिरी घाउ मात्र सञ्चो भयो ।
पाखुराका दर्जनाैँ गोली झिकिए पनि बायाँ हातमा दुई वटा , दाड र पिठ्यूँमा ३१ वटा , कानको जरा हुँदै छिरेको मुखभित्र १ , दाहिने पट्टी टाउकोमा १ र बायाँ टाउकोमा २ वटा गोली निकाल्न नसकिएका र अझै नशा र मासुमा टाँसिएर रहेका छन् ।
जुन एकै चोटी अप्रसन गर्न नमिल्ने कुरा स्वास्थ्यकर्मीले भनेको उनी सुनाउँछन् । बेग्ला बेग्लै अप्रेसन गर्न आफ्नो हर्कतले नभ्याएको कुरा जुतीराम घर्तीले निकै मर्माहत हुँदै बताए ।
यतिखेर उनीसँगै लडेका पासाङ उपराष्ट्रपति भएका छन् । अर्का कमाण्डर प्रभाकर पटक पटक मन्त्री भएका छन् । तर त्यहि युद्धमा जीवनलाई साक्षी राखेर लडेर घाईते भएका यी इमान्दार जीउँदो सहिदको सर्वत्र बेवास्ता हुँदा उनको बोली अवरुद्ध हुन्छ ।
म कहाँ आउँदा उनी निकै भावुक भएका थिए । न्यायको कुनै बाटो खोज्दै थिए । कहिँबाट पनि उनको सहयोगको लागि कुनै प्रयास नगरिए पछि , अन्तत: उनी मसँग आफ्नो जीवन कहानी लेखाइ माग्न आएका छन् ।
म जिम्मेवारीले यतिखेर निकै थिचिएको छु । मैले उनलाई दिने भनेको नै शब्द हो । शब्दद्वारा नै म सक्दो उनको सहयोग गर्नेछु ।
अघिल्लो पटक मैले उनको बारेमा सञ्जालमा पोष्ट गरे पछि विभिन्न महानुभावहरुले सहयोग गर्ने कुरा टिप्पणीमा र म्यासेन्जरमा आए पछि , जुतिराम घर्ती निकैबेर भावुक भए । उनले सहयोगको अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् ।
कोहि कतै मनकारी महानुभावहरु हुनु हुन्छ भने उनकै खाता नम्बरमा रकम जम्मा गर्न सहयोगको याचना गरिन्छ । हरेक मनकारीको एक एक सहयोगले उनको ठूलो राहत हुनेछ । विभिन्न सँघ संस्था र आम समुदायमा उनको लागि म यसै सञ्जालबाट सहयोग जुटाई आफु हुनुको दायित्व निर्वाह गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । यसलाई सबैले सीयर गरि बढावा गरि दिनु होला । धन्यबाद !
देशभित्रकाहरूले खाता नम्बरमा र देश बाहिरकाहरूले दुबै उल्लेख गर्नु / साभार: रामाकान्त बास्तोला रमेशको फेसबुक बाट
Previous Postदिउँसोभन्दा रातमा बढी बिन्दास धरान! Next Postनेपालमा भएको सबै भन्दा ठुलो विमान दुर्घटना: पाकिस्तानि विमान ( यस्तो भएको थियो त्यो दिन)